ESI EMEGHE MXL - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Mepee usoro MXL
Nbudata Adobe Premiere Pro na asụsụ ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ Bekee, ndị ọrụ na-eche ma enwere ike ịgbanwe asụsụ a na otu esi eme ya? N'ezie, na Adobe Premiere Pro enwere ike ime otú ahụ. Otú ọ dị, usoro a adịghị arụ ọrụ na nsụgharị niile nke usoro ihe omume ahụ.
Otu esi agbanwe asụsụ ogbi nke Adobe Premiere Pro site n'asụsụ Bekee na Russian
Mgbe ị mepee windo mmemme ahụ, ị ​​gaghị ahụ ntọala ọ bụla maka ịgbanwe asụsụ ahụ, dị ka a na-ezobe ha. Iji malite, ịkwesiri igodo nchikọta igodo "Ctr + F12" na Windows. Nlekọta pụrụ iche ga-apụta na ihuenyo. N'etiti ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, ịchọrọ ịchọta akara "Ngwa ngwa". Enwere m Bekee na mpaghara a. "En_Us". Ihe m kwesịrị ime bụ ide ede a kama "En_Us" "Ru_Ru".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-emechi ihe omume ahụ ma gbanwee ọzọ. Na tiori, asụsụ ga-agbanwe.
Ọ bụrụ na kama otu ọrụ nke ị hụrụ ụdị njikwa dịka dị na foto, mgbe ahụ, mbipute a anaghị enye maka ịgbanwe asụsụ ahụ.
Nke a bụ otú ngwa ngwa ị nwere ike ịgbanwe asụsụ interface na Adobe Premiere Pro. Ọ gwụla ma ọ bụrụ na ọ bụ na mbipute gị, a ga-enye ohere a.